[Tuesday, February 6th, 18] :: Faarax Macallin oo dhaliilay madaxda maamullada Soomaaliya
Nairobi (RH) Guddoomiye ku xigeenkii horre ee baarlamaanka Kenya Faarax Macacallin ayaa sheegay in madaxda maamul goballeedyada ay basaasiin u yihiin waddamada cadowga ku ah Soomaaliya sida Itoobiya.
Faarax Macallin ayaa sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliya looga baahan yahay in ay iska qabtaan madaxda maamul goballeedyada maadama ay khatar ku yihiin jirintaanka Soomaalida.
Waxa uu sheegay in madaxda maamul goballeedyada ay xiriir la lee yihiin waddamada Imaaraadka iyo Itoobiya isla markaanna mid kasta uu warbixin ka siiyo sirta Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.
Faarax Macallin, ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in wasiiradii horre ee Soomaaliya marka ay shirarka ka qeybgalayaan in ay si toos ah samiicadda ugu furi jireen waddamada Itoobiya iyo kuwa kale oo cadow ku ah Soomaaliya.
“Waa mooryaan ma ahan madaxweynayaal waxaa laga rabaa in madaxda dowladda iyo shacabka Soomaalida ay iska qabtaan kuwaasi”ayuu yiri Faarax Macallin.
Waxaa uu sheegay in qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul Gobolleedyada ay musuq maasuq miiranyihiin,isagoo tusaale u soo qaatay mid ka mid ah uu lacag malaayin doollar uu dhigtay Akoonno uu ka furtay Kenya ilmahiisana ku saxiixday sida uu yiri.
Guddoomiye ku xigeenkii horre ee baarlamaanka Waddanka Kenya ayaa marar badan ka hadlay xaaladda Soomaaliya, waana nin aad ula socda arrimaha Soomaaliya.